Home WARARKA Xiisadda shiidaalka saaxil, Xalka Suldaan Xandulle iyo Xiqdiga Dan Iyo Duco
Shirkadda shiidaalka BGP ayaa gobolka saaxil ka bilawday sahamin shiidaal sannadkii 2016 kaas oo soo maray duruufo kala duwan iyo marxallado adag ok ay kala hor yimaadeen dad ka soo jeeda deegaanka shiidaalka laga baadhayay iyo shakhsiyaad danaysi hunguri qaaday. Mashruuca shiidaalka Saaxil ayaa faro-cididood kaga badbaaday duullaan ay ku soo qaadeen siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Saaxil kuwaasoo oo ay ka mid ahayen wasiir ku xigeenno gobolka kaga jiray xukuummadii Siilaanyo.iyagoo uga Dan laha in marlabad ay sallaanka siyaasada xukumada muuse Kaga soo koraan maadama ay iska wayeen xukuumadda cusub.
Aakhirkii Suldaan Maxamed Maxamuud Xandulle (Suldaan Indhacase) ayaa cummaamada u qaatay dejinta xiisadda shiidaalka oo meel adag gaadhay.
Suldaan Xandulle waxaa uu shir doceedyo la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Saaxil oo ay ka midyihiin sallaadiinta, Xildhibaannada iyo haldoorka.
Suldaanku waxaa uu ku guulaystay in dhammaan dadkii kala duwanaa la qaataan Horumarka Gobolka Saaxil oo uu faa’iidada ugu wayni ka soo geli doonto mashruuca shikdaalka.
Sallaadiinta iyaguna isbarbartaagay ee ku raacay midho-dhalka mashruuca waxaa ka mid ah Suldaan Maxamuud Axmed Sheekh, Suldaan cabdikariin Fariid, Suldaan Tuulo, Ugaas Casaan iyo Xildhibaannada Golaha Wakiillada kaga jira Gobolka Saaxil.
Taasoo sababtay in kullankii u danbeyay ay wasaaradda Macdanta iyo Haldoorka Saaxil isugu yimaadaan maanta oo ay isku waafaqeen sidii deegaanka Saaxil loogu furi lahaa kulanno ku saabsan muhiimmada mashruucani Gobolka u leeyahay iyo sidii looga qaybgeli lahaa dhammaan. Gaar ahaan 25ka Tuulo ee2mashruucu ka bilaabmi doono badhtamaha Bisha Saddexaad ee soo socota taas oo sababtay in ay soo dhaweeyaan Wasaaradda Macdanta iyo Shirkadda sahaminta fulin doonta.
Waxaana Xusid mudan Wasiirka Wasaaradda Macdanta oo 20kii sano ee u danbeyay la soo shaqeeyay Haydaha gaarka loo leeyahay, khibrad dheerna u leh shaqada maamulka iyo maaraynta, ahna masuul ka soo jeeda Gobolka Saaxil ee mashruucan shiidaalka nasiibka u helay.
shiidaal baadhista berbera
Previous articleItoobiya oo xabsiga ka sii daysay Hoggaamiye sare oo Mucaarid ah xilli ay socdaan Rabshado
Next articleWasiirka gaadiidka iyo horumarinta waddooyinka oo dhagaxdhigay wejigii labaad ee wadada Ceerigaabo